2022 Umbiko Wesimo Semboni Yamahhotela
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Industry Hospitality Industry » 2022 Umbiko Wesimo Semboni Yamahhotela
I-23 min ifunde
Njengoba unyaka ka-2020 bekuwunyaka wamanzi embonini yamahhotela, kwaba njalo nango-2021. Ngenkathi ubhubhane luqhubeka, imboni yaqala ukuvela kabusha, igqugquzelwa ukusatshalaliswa kwemijovo kazwelonke kanye nethemba labathengi. Umbiko wokuqala we-American Hotel and Lodging Association weSimo Semboni Yamahhotela, okhishwe ngoJanuwari 2022, ubonise ukuthi imboni yamahhotela iqine kangakanani futhi yabikezela okwakuzokwenzeka kubanikazi bamahhotela nabaqhubi, abasebenzi kanye nabahambi.
Ngemva konyaka, imigomo itholakala kunoma ubani ose-United States oneminyaka emihlanu nangaphezulu, futhi u-63% wabantu base-US ugonywe ngokugcwele.
Kodwa-ke amacala ayakhula, njengoba kukhathazeka ngokuhlukahluka kwamagciwane amasha kanye nokuqubuka.
Iqiniso liwukuthi i-COVID-19 iyaqhubeka nokuba nomthelela empilweni yansuku zonke - futhi lokhu kuphilisana ngokuhlanganyela kuzoba indinganiso yekusasa elibonakalayo. Leli gciwane liwumphumela wombiko weSimo Semboni Yamahhotela walo nyaka, okuhlanganisa
izitayela zezomnotho ezinkulu ezibikezelwe kanye noshintsho olulindelekile kumzwelo wabathengi namabhizinisi
Isigaba esilandelayo sokululama sizobe singalingani, singase sibe nokuguquguquka. Kepha into eyodwa esele iqinisekile: unyaka ka-2022 unyaka wesivakashi "esisha".
Ukuhamba ngenjabulo—okungukuthi, ukuhlanganisa uhambo lwebhizinisi nokungcebeleka—kuqhume phakathi nalolu bhubhane, okubonisa ushintsho olukhulu endleleni yokuziphatha yabathengi kanye nokuziphatha okuhlobene nokuhamba. Lokhu kuzophinde kube nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwamahhotela njengoba imboni isabela ukuze ihlangabezane nezidingo nokulindelwe yizivakashi zayo.
Zonke izinkomba zikhomba ukuthi imboni yamahhotela izoqhubeka nokuya ekululameni ngo-2022, kodwa lokho kutholakala okuphelele kusasele iminyaka embalwa. Ngokusho
ekuhlaziyweni kwe-AHLA yi-Oxford Economics, isidingo sasebusuku sehhotela kanye nemali engenayo yamakamelo kulindeleke ukuthi icishe ibuyele emazingeni ka-2019
Imali engenayo yasekamelweni kulindeleke ukuthi ifinyelele ku-$168 billion, ngaphakathi kwe-1% yezibalo zika-2019 kanye
Ukunyuka ngo-19% uma kuqhathaniswa no-2021. Ukuhlala kulindeleke ukuthi kufinyelele ku-63.4%, kusondele izinga lama-66.0% atholwe ngo-2019 futhi libe ngaphezu kakhulu kwama-44% nama-57.6% afinyelelwe ngo-2020 no-2021, ngokulandelana.
Ukubuyiselwa kwemali etholwa ngamakamelo kuyizindaba ezamukelekayo kubanikazi bamahhotela, nokho kunjalo
ngingayikhulumi yonke indaba.
Ngisho noma sekubuyelwa ekusebenzeni kwemali engenayo yangaphambi kobhubhane, lezi zibalo azibandakanyi imali eyengeziwe elinganiselwa ngaphezu kwezigidigidi ezingama-48 zamaRandi ekusetshenzisweni kwangaphambi kobhubhane ekudleni naseziphuzweni, endaweni yemihlangano, nakwezinye izinsiza ezihambisanayo—umthombo wemali engenayo okulindeleke ukuba uhlehle kakhulu. ekubuyiseleni kwayo. Ochwepheshe bemboni bahlela ukuthi imihlangano nemicimbi engaphezudlwana kancane nje kwengxenye izobuya ngo-5, 2022 kanye nemithelela engemihle yokuhluka kwe-Omicron okusazonqunywa.
Ukwengeza, amahhotela ezweni lonke ayaqhubeka nokumba kusukela esikhathini seminyaka emibili lapho alahlekelwe khona isamba semali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-111.8 zamarandi kuphela.7 Ukubuyiselwa kancane ngo-2022 ngeke kwanele ukuvumela amahhotela ukuthi akhokhele ngokuphelele ababolekisi, aqashwe kabusha ngokugcwele. abasebenzi, batshale imali ekuthuthukisweni kwezakhiwo okubambezelekile, futhi bagcwalise kabusha izimali ezigciniwe zebhizinisi.
Kusele izivunguvungu ezinamandla kanye neziphazamisi ezingaba khona ukuze umuntu alulame ngokugcwele. Ngenkathi uhambo lokungcebeleka luzobuya ngokuphelele ngo-2022, ukuhamba kwebhizinisi kulindeleke ukuthi kuhlale ngaphansi kwamazinga angaphambi kobhubhane. Ubunzima bemiphumela yesikhashana ye-Omicron embonini yamahhotela abukacaci.
Ngaphezu kwalokho, okuhlukile okuzayo kuzodala ukuguquguquka kukho kokubili ukubuya kokungcebeleka nokuvakasha kwebhizinisi kanye namashumi ezigidigidi zamadola axhunywe emihlanganweni nasekuchithweni kwemicimbi. Ngokombiko we-Cvent ka-November 2021 we-Group Business Insights Report, ingxenye eyodwa kwezine yemihlangano etholakalayo iyingxubevange, futhi u-72% wabahleli bemihlangano abahloliwe babheka imicimbi enengxenye yomuntu siqu.
Amahhotela azoqhubeka nokuzabalaza nokushoda kwabasebenzi, okunciphise ikhono lawo lokukhulisa imali evela kubahambi abangase babe khona. Ingcindezi yokwehla kwamandla emali isho ukuthi nakuba ukululama okungenzeka kusenesikhathi, ukulungiswa kwangempela kwemboni kuzothatha kuze kube u-2025, ngokusho kwe-STR kanye neTourism Economics.
Yize ukululama kweqiniso emazingeni angaphambi kobhubhane kusasele iminyaka eminingana, lapho amahhotela eqonda khona, elungiselela, futhi esabela ezidingweni zesivakashi “esisha,” kulapho ikusasa libheke khona imboni ebalulekile kubantu baseMelika. umnotho.
Umbono wokuhamba wango-2022 uthrenda kahle, kodwa uyaqhubeka
ukuntengantenga kulindelekile, kusasele iminyaka yokululama ngokugcwele. Amanani okuhlala
kanye nemali engenayo yegumbi kulindeleke ukuthi isondele kumazinga ka-2019 ngo-2022, kodwa
umbono wemali etholakalayo unethemba elincane. Uhambo lwebhizinisi lulindelwe
ukuhlala phansi ngaphezu kwama-20% isikhathi esiningi sonyaka, kuphela ama-58%.
imihlangano nemicimbi kulindeleke ukuthi ibuye, kanye nemiphumela emibi ephelele ye
I-Omicron ayikaziwa okwamanje. Izivunguvungu zabasebenzi zizosho amazinga okuqashwa
ekupheleni konyaka izokwehla ngo-7% uma kuqhathaniswa nowezi-2019.
Abahambi “abasha” balindele izinto ezihlukile kumabhrendi amahhotela. Abathengi'
izisusa, ukuziphatha, kanye nokulindela konke kwashintsha phakathi nobhubhane—
ishintsha kakhulu indlela amahhotela asebenza ngayo ukuze anelise izivakashi zawo, ezikhona
kungenzeka kakhulu ukuba yizihambi zokungcebeleka noma ezokuzijabulisa noma imihambima yedijithali. Njenge
umphumela, ubuchwepheshe buzoba bucayi nakakhulu empumelelweni yendawo.
Ukugcina nokuheha ithalente eliphezulu kusho ukukhombisa izindlela zomsebenzi,
hhayi imisebenzi kuphela. Amahhotela angakha abasebenzi besikhathi esizayo ngokuthi
ukukhulumisana ngobubanzi bamathuba emisebenzi atholakala ku
imboni kubasebenzi bamanje kanye nalabo abazoba khona.
Izinyathelo zokusimama zizodlala indima ebaluleke kakhulu
imboni. Amahhotela azibophezela ezinhlosweni zokusimama kanye
izinhlelo azigcini nje ukwanelisa okulindelwe yizivakashi, ziyazenza
izinguquko ezilungele ibhizinisi futhi.
Izinhlelo zokwethembeka zizoguquka ngokuphendula kusimo esisha sokuvakasha.
Ngokuhamba kwebhizinisi okusezingeni eliphezulu, izinhlelo zokwethembeka zendabuko No
isikhathi eside nengqondo. Izinhlelo ezisebenza kahle kakhulu zokwethembeka zizonikeza okwengeziwe
imiklomelo yomuntu siqu ehlangabezana nezidingo zabahambi bebhizinisi ngezikhathi ezithile
nabahambi bezokungcebeleka ngokunjalo.
UKULUNGA OKUHAMBA OKUTHOLAKALA KAHLE, KODWA KULULA OKUVUTHA
Ukuntengantenga kokuhamba esikhathini sobhubhane kwenza ukulungela uhambo lokubikezela kube bucayi kakhulu - nokho kube nzima kakhulu - kunangaphambili. Ingabe abantu bayafuna ukuhamba? Ingabe izinhlelo zabo zokuhamba zizoncishiswa ngamaqiniso abanzi ezomnotho? Ingabe imingcele yokuhamba ekhaya noma lapho beya khona izobaphoqa ukuba bashintshe izinhlelo zabo?
Kalula nje, ukulungela uhambo kubonisa indlela abantu abazimisele ngayo ukuthatha uhambo. Ukuze siqonde ukulungela ukuhamba namuhla, siphendukele ku-Accenture Travel Readiness Index, indlela entsha yokuhlola inhloso yokuhamba ngokufanele izinto ezingokoqobo zendawo yokuvakasha yanamuhla. Inkomba yanyanga zonke, yamazwe amaningi ilandelela kokubili izinkomba zokuhamba nezingezona ezokuvakasha ezinethonya inhloso ehlanganisa isimo sezempilo sezwe esihlobene ne-COVID-19, izici zomnotho zesikhashana, isidingo sohambo, nesimo sokuhamba. Lezi zinkomba zikalwa ukuze zibonise usayizi womthelela wazo ekulungeni kohambo.
Ukulungela Kuyinhloso Enyakazayo
I-Index ibuyekezwa nyanga zonke ngoba ukulungela ukuhamba akuphelele. Lokhu kuzoba yiqiniso inqobo nje uma lolu bhubhane lungalawulwa ngokugcwele futhi amagagasi amasha, okuhlukile, kanye nezimpendulo zikahulumeni nezomphakathi zezempilo zihlala zenza kabusha ukwethenjwa kwabantu nokuzethemba kwezokuvakasha. Isibonelo, cabanga ukuthi imikhawulo yokuhamba yabekwa ngokushesha kangakanani emazweni emhlabeni jikelele lapho okuhlukile kwe-Omicron kuvela ngasekupheleni kuka-2021. I-World Health Organization ikhethe okuhlukile kokukhathazeka ngoNovemba 26, 2021, nangomhla ka-2 Disemba 2021, uMongameli. UBiden umemezele imigomo emisha yokuhamba kwamanye amazwe.
Izitayela zokulungela ukuhamba engxenyeni yesibili ka-2021 ziyafundisa ukuthi yini okufanele uyenze
lindela ngo-2022: umfutho emaphaketheni ohambisana nokuma futhi uqala okubangelwa
inkomba yokuhamba eyodwa noma ngaphezulu.
Isithombe Somhlaba Wonke
Ngesidingo sokulinda futhi abantu abaningi bakhetha ukuqhubeka noma ukubuyela empilweni yansuku zonke naleli gciwane phakathi kwabo, ukulungela ukuhamba kukhuphuke ngo-5% ngoSepthemba 2021 uma kuqhathaniswa no-Agasti 2021 emhlabeni jikelele. Nokho, izitayela zokulungela zahlala ziguquguquka ekupheleni konyaka. Novemba 2021 yehle ngo-2% kusukela enyangeni edlule ngenxa yokuqubuka kwezifo kanye nemikhawulo emisha yokuhamba. Ukulungela sekukonke ukungena
UNovemba 2021 ube ngu-23% ngaphansi kwesisekelo sango-2019.
NgoSepthemba 2021, imakethe yaseMelika yehle ngo-3% ngo-Agasti 2021 ngenxa yemikhawulo eqinile yabahambi bamazwe ngamazwe. Ukuhamba kwezindiza nokuhlala kwehhotela kulandele iphethini yomlando, ewa ngemva kwehlobo eliqine kakhulu futhi kubonisa amandla ekwindla. Ukuhlolwa okwenziwa yiTransportation Security Administration (TSA) kwafinyelela umvuthwandaba ngoJulayi kubagibeli bendiza yezindiza abangaphezudlwana nje kwezigidi ezi-2, futhi amahhotela afinyelela ku-71%.
NgoNovemba, ukwehliswa kwemikhawulo yokuhamba yaseYurophu ukuya e-United States kwenze ukwanda okukhulu kwamandla ezindiza, okusho ukwanda kwesidingo.
12 Izwe laqhubeka livula uhambo njengoba kufika isikhathi samaholide. Eqinisweni, isonto lokubonga lika-2021 laliphule irekhodi lamahhotela aseMelika—amanani okuhlala ayeku-53%, kanti i-RevPAR yayiphezulu ngo-20% kunesikhathi esifanayo ngo-2019.
I-Global Pandemic ene-Local Impact
Akukhona nje ukulungela kwabavakashi basekhaya kuphela okufanele imboni yamahhotela ikuphendule njengomshayeli wesidingo ngo-2022. Abavakashi bamazwe ngamazwe bayizithameli ezibalulekile futhi.
Abahambi bamazwe ngamazwe babalelwa ku-15% wezindleko zokuhamba zase-US zizonke ngo-2019 ngaphambi kokuba ubhubhane luqale, kodwa kuphela ama-6% ngo-2020.15 Ngo-2022, i-World Travel & Tourism Council iveza ukweqa okungama-228% ekusetshenzisweni kwemali e-United States ngabahambi bamazwe ngamazwe uma kuqhathaniswa 2021.
Ukulungiselela lokhu kuhlasela okungase kube khona kusho ukuvuma ukuthi imizwa mayelana nohambo nokulungela ukuhamba izohluka kuye ngamazwe ngoba le nkinga yomhlaba wonke yenziwe yasendaweni kakhulu ngomthelela wayo. Amahhotela acabanga ngokulungela ngokusebenzisa i-lens yalokho abantu abadlule kukho ubhubhane - futhi manje - asesimweni esihle kakhulu sokunquma ukuthi adinga yini ukwethula izinyathelo zempilo nezokuphepha ezengeziwe ukuze akhange laba bahambi.
Nakhu okuvezwa yi-Index mayelana nokulungela ukuhamba kulokho okulindeleke ukuthi kube yizimakethe ezibucayi ezingenayo e-United States.
Ukungaqiniseki okusele mayelana nemvelo yokwehluka kwe-Omicron ngesikhathi sokushicilela kuphakamisa ukuthi kunzima kangakanani ukubikezela ukulungela kohambo ngo-2022. Esingakucabanga ukuthi imikhawulo ebekiwe yokulwa nokwehluka kwe-Omicron cishe izohlala kuze kube uMashi. Ngaphezu kwalokho, izici ezimbalwa zesikhathi esifushane zinamandla okuba nomthelela ekulungeni kohambo ngendlela enhle noma embi, futhi kukonke, asilindele ukuthi i-Index ibonise izimpawu zokululama kuze kube maphakathi no-2022 ekuqaleni.
UMBONO WOKUPHATHWA KWEZINDLU KA-2022
Ukulungela ukuhamba kuzokwazisa indlela imboni yamahhotela esebenza ngayo ezindaweni ezibalulekile ezihlanganisa ukuhlala, imali engenayo yegumbi, ukuqashwa, kanye nesifiso sokudla sabathengi. Ngenkathi u-2022 engeke akubone ukubuya okugcwele ku-2019, umbono unamandla kunalokho owawuyikho ngo-2021.
Ukuhlala kwamahhotela kulindeleke ukuthi kuqhubeke nokukhula kusuka emazingeni aphansi omlando ka-2020, okulinganiselwa ku-63.4% ngonyaka, ngokusho kwe-STR kanye neTourism Economics.
Ngo-2019, amahhotela esizwe acishe abe ngu-60,000 ahlangabezane nesilinganiso sokuhlala kwamahhotela ngonyaka esingama-66%, athengisa amagumbi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.3. Lo bhubhane ulethe ukuhlalwa kwamahhotela aseMelika kwehle ngo-24.5% ngo-Ephreli 2020, kanti ukuhlala kwaminyaka yonke kwehle kwafinyelela ku-44% ngonyaka. Ukuhlala kwamahhotela ngo-2021 kulinganiselwa cishe ku-58%—isibalo esigcwele samaphuzu amahlanu ngaphezu kwalokho ebesicatshangelwe kulesi sikhathi ngonyaka odlule (isilinganiso esingu-52.5%), kodwa sehle ngamaphuzu angaphezu kwayisishiyagalombili ukusuka emazingeni angaphambi kobhubhane.
Nakuba amanye amahhotela asebenza ngokugcwele eqala ukwephula ukusebenza ngisho nalapho ehlala amaphesenti angu-50, lokhu akuzibali izikweletu zezindlu nezinye izindleko. Ngakho-ke, amahhotela amaningi achitha iminyaka emibili edlule ngaphansi kwephuzu lawo lokuphumula, ethembele emalini ebekiwe ukuze akhokhe izindleko. Ngakho-ke ngisho nokubuyela ezindaweni eziseduze nobhubhane ngo-2022, amahhotela anendlela yokuhamba ngaphambi kokululama kwangempela. Amazinga okuhlala kulindeleke ukuthi aqhubeke enyuka ngo-2022, okuyisilinganiso esingu-63.4% ngonyaka.
Umfanekiso 1 - Ukuhlala Kwegumbi Lehhotela Ngonyaka
Ngemuva kokwehla cishe ngo-50% ngo-2020, imali engenayo yegumbi lehhotela izocishe ibuyele kuyo
Amazinga ka-2019 kulo nyaka. Ukusetshenziswa kwezindleko okungezona zegumbi kuzoqhubeka nokusalela emuva.
Ngaphambi kwalolu bhubhane, amagumbi ezivakashi embonini yamahhotela ayizigidi ezi-5.4 enze imali engaphezu kwezigidigidi ezingu-169 zamarandi ngonyaka, okungabandakanyi amashumi ezigidigidi ezengeziwe ezitholwa ngokuqasha amagumbi okuhlangana neminye imithombo yemali engenayo.
Ngo-2020, imali etholwa ngamakamelo amahhotela yehle cishe ngo-50% kulo lonke elase-United States yafinyelela ku-$85.7 billion, yase iphinda yafinyelela ku-$141.6 billion ngo-2021. Lokhu kusho ukuthi kule minyaka emibili, amahhotela alahlekelwe yiqoqo lama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-111.8 emalini engenayo yasekamelweni kuphela. Imali engenayo yegumbi kulindeleke ukuthi ifinyelele ku-$168.4 billion kulo nyaka, noma phakathi nephuzu elilodwa lamazinga ka-2019.
Umbono wemali engenayo evela emihlanganweni, imicimbi, nokudla neziphuzo - olinganiselwa ezigidini ezingama- $ 48 ngonyaka ngaphambi kwalolu bhubhane - awucace kangako. Iphrojekthi ye-Knowland ezobuya kuphela ngama-58.3% emihlangano nemicimbi ngo-2022, nama-86.9% emuva ngo-2023, okusho ukuthi ingxenye enkulu yaleyo mali engenayo izoqhubeka ingekho.
Umfanekiso 2 - Imali Engenayo Yegumbi Lehhotela Ngonyaka
Ekupheleni kuka-2022, amahhotela kulindeleke ukuthi aqashe abantu abayizigidi ezingu-2.19—ama-93% abantu.
amazinga abo angaphambi kobhubhane.
Ngo-2019, amahhotela aseMelika aqasha ngokuqondile abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-2.3. Ngemuva kokwehla okukhulu kuka-2020, amahhotela aqede u-2021 eku-77% wamazinga awo okuqashwa ngo-2019.
Yize kulindeleke ukukhula okuqinile onyakeni ozayo, amahhotela kulindeleke ukuthi aphele ngo-2022 nabasebenzi abayizigidi ezingu-2.19—ehle ngo-166,000 noma ngo-7% uma kuqhathaniswa no-2019, okubonisa ukuqhubeka kwemimoya emakethe yezabasebenzi.
Umfanekiso 3 - Ukuqashwa Ngonyaka
Kunesidingo esilindile sokuhamba—ikakhulukazi phakathi kwabahambi abasebasha.
Ngemuva kwezinyanga zokuvalelwa yedwa kanye nemikhawulo yokuhamba ekuqaleni kwalolu bhubhane, abantu baseMelika abaningi babemagange ukuhamba futhi ngo-2021; leso sidingo kulindeleke ukuthi siqhubeke kulo nyaka. Ngokombiko weMorning Consult's State of Travel and Hospitality Q4 Report, u-64% wabantu abadala baseMelika bathi bahambe phakathi nonyaka odlule, kanti abathengi abancane nabahola kakhulu abahamba phambili.
Lo mbiko uphinde waveza ukuthi emazweni ayisishiyagalombili asetshenziselwe inhlolokhono, abantu baseMelika bangabanye abazimisele ngokungena emgwaqeni, kanti u-50% ulindele ukuthatha uhambo lokungcebeleka phakathi nezinyanga eziyisithupha ezizayo.
ngokuvumelana ne-Accenture's Holiday Shopping Survey yase-US yango-2021, u-40% wabathengi base-US bahlela ukugxila ekongeni iholide noma uhambo ngokuzayo. Ukongela uhambo yinto yesibili ebaluleke kakhulu kubathengi yezezimali ngemva kokukhokha isikweletu (Figure
Ama-43% aphelele alindele ukuhamba isikhathi eside noma ngaphezulu ezinyangeni eziyisithupha ezizayo kunalokho abekwenzile uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo sezinyanga eziyisithupha ngo-2019.
Umfanekiso 4 – Okubalulekile Kwezezimali Okuphezulu Oku-5 Kwabathengi Base-US ka-2022
I-Gen Z kanye neMillennials bazimisele kakhulu ukuhamba futhi, nakuba besadinga ukuqinisekiswa ukwenza lokho. Ingxenye eyodwa kwezintathu yaleli qembu ikholelwa ukuthi ulwazi olufika ngesikhathi, ukuphathwa okungcono kokugeleza kokuvakasha, kanye nekhono lokubhukha nokuqinisekisa isimo sokugoma ngezinhlelo zokusebenza zenkampani yezokuvakasha kuzobancenga ukuthi baphinde bahambe.
Accenture Airline Business Ukuhamba ngezebhizinisi Covid-19 Employment Impilo Hospitality Ihhotela Izinkulungwane zeminyaka Inhlangano UKUVUSELELWA Thanksgiving Ezokuvakasha Ukuphathwa kwezokuThutha kwezokuThutha I-united states World Health Organization
Umhambi Omusha: Ukufuna Inhloso Njengoba Umhlaba Uvulwa Kabusha
I-Minnesota ifuna ukuba indawo oya kuyo ngoSuku LukaZwelonke Lokuvakasha
Ukukhululwa Okukhulu Kwabahambisi Bokuvakasha baseNdiya Ekuhoxisweni kwe...
Ezokuvakasha Okudlulele: Imishini yase-Italy eya Kwezomoya...
Isitatimende Sikahulumeni Sase-US Siqinisekisa Impi YaseRussia...
ICanada yethula izindlela ezintsha zemvelo zokuhamba ngomkhumbi ...
Isigaba 3 Esisha Socwaningo Lwe-insulin Yomlomo
Isicelo Esisha Somuthi Wokwelapha Amangqamuzana Angewona Amancane...
I-Therapy Evunyelwe Yokuqala Ye-Cytopenic Myelofibrosis
IHawaii, iNingizimu Pacific, iYurophu kanye neCaribbean...
Ukuhlasela Kwezimoto Ezibulalayo eBelgium Carnival
I-China Eastern Airlines B737 iphahlazekile
Abavakashi Abalibangise eHawaii Kodwa Bechitha Imali Encane
Idatha Entsha Ngezimila Zengqondo Yezingane
I-Dusit Thani Hua Hin: Indawo yokudlela entsha esebhishi ene...
I-Uniglobe Travel Iqoka Umhlinzeki Omusha Othandwayo
Abantu baseMelika bathola ukushayela okwesabekayo kulezi zinsuku
I-Southwest Airlines yethula i-Wanna Get Away Plus
Ama-Tour Tour Operators ase-Italy ajabule...
I-IGLTA Post-bhubhane LGBTQ+ Travel Survey ithola i-CETT...
Inzwa entsha yokutholwa kokubanjwa okungenantambo esulwe yi-FDA
Idatha Entsha Yokunciphisa Ukuphefumula Okubangelwa I-Fentanyl...